Iingcebiso ezizodwa zokuqala inqanaba loyilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba uyinxalenye yelo qela labantu abafuna ukuqala a Inqanaba loyilo, eli nqaku liza kuba eligqibeleleyo kwaye kuyimfuneko ukuba nomntu onolwazi ukuba yintoni Isazisi esibonakalayo, ngubani owaziyo ukuhlela ividiyo, ukwenza iisayithi, usetyenziso kunye neempawu.
Inyani yile umphathi ufuna umqeshwa ukuba uyakwazi ukwenza yonke into umntu oqeqeshwe ngokwenyani ayazi ukuba angenza njani okanye umntu ongasengumncedisi uyayithobela le nto.
Umvuzo uya kuhlala ungumceli mngeni omkhulu kumncedisi xa efuna ngokwenene ukuba yinxalenye yalo msebenzi. Ewe kunjalo ihlala iyahluka ngokuxhomekeke emsebenzini Nokuba umntu ukhetha okanye uqeshiwe, nangona kunjalo, kufuneka kusoloko kukhunjulwa ukuba kwezi zihlandlo zininzi izinto ezintsha ezinokufundwa.
Kungenzeka ukuba kumaxesha amaninzi kuya kufuneka thumela ipotifoliyo, kuba kwiimeko ezininzi, ipotifoliyo yomfundi iba yeyona iseti yezifundo ezininzi ezithathwe kwiwebhu yeFotohop, imizobo yencwadi kunye nokubuyiselwa okudala kweefoto zakudala zosapho.
Ingcebiso kukuba sinako fumana enye indlela uyakwazi ukubonisa uluvo lwento ethile esiyithandayo, ngokungathi uyawuthanda umculo, zama ukufumana into ebonisa ukuthanda kwakho malunga nesi sifundo kwaye uninzi lweminqweno abanayo abafundi xa bephumelela eyunivesithi, yiyo loo nto Ndifuna ukusebenzela imibutho emikhulu ezinje ngeGoogle okanye kuFacebook, ngokuqinisekileyo oku kunokuba kuhle okanye kubi.
Ukuba sele uyifumene Inqanaba loyilo obelifuna kakhuluKuya kufuneka wenze konke okusemandleni akho ukwenza loo mzuzu ukhethekileyo ube ngamava amahle.
Ngeli xesha uhlala ubuza nayiphi na imibuzo enomdla kunye / okanye enomdla, le yenye ye Amanqanaba obomi apho abantu baqala ukufumanisa kancinci kancinci ukusebenza kwendawo yokusebenza.
Kwaye ukukwazi ukubuza imibuzo malunga nayiphi na imeko okanye ngokubhekisele kwisisombululo sayo nayiphi na into kuluncedo kakhulu ekuqondeni ukuba yile nto siyifunayo ngokwenene, zeziphi ezinye iindlela esinokuzijonga ngelinye ixesha kwaye kubaluleke kakhulu, masibonise ukuba ngokwenene ndiyakubona usenza olu hlobo lomsebenzi ixesha elide elizayo.
Ukuqukumbela sinokuthi kunyanzelekile banolwazi lwesoftware kunye nezakhono, kodwa akuyomfuneko ukuba ube nalo lonke ulwazi, ngento nje esisiseko inokwanela ukuqala eli nqanaba kwicandelo lezabasebenzi kwaye nokuba siqala kwi inkampani enkulu okanye encinci, kuba siya kuhlala sifumana amava.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Iingcebiso ezizodwa zokuqala inqanaba loyilo